Mubarak oo loo wareejinayo isbitaal militeri - BBC Somali - Warar
Mubarak oo loo wareejinayo isbitaal militeri
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 December, 2012, 15:53 GMT 18:53 SGA
Xusni Mubarak waxa uu maamulayay dalka Masar muddo 30 sano ah.
Dacwad oogaha guud ee dalka Masar ayaa amar ku bixiyay in Madaxweynihii talada dalkaasi laga riday ee Xusni Mubarak, in laga saaro xabsiga oo loo wareejiyo isbitaal militerigu leeyihiin kadib markii xaaladdiisa caafimaad ay ka sii dartay.
Lama oga goorta la wareejin doono Xusni Mubarak.
Mubarak ayaa muddoo kooban loo qaaday isbitaalka toddobaadkii hore kadib markii xanuun qabtay isaga oo ku jira musqusha qubeyska ee xabisga.
Madaxweynaha hore oo da'diisu tahay 84 jir ayaa waxa uu xukumayay dalka Masar 30 sano -- waxaana ku qasbay inuu xafiiska ka dego kacdoonkii ka dhacay dalka Masar bishii Febraayo ee sanadkii 2011.
Waxaa lagu xukumay xabsi daa'in doorkii uu ku lahaa dadkii lagu dilay intii ay socdeen banaanbaxyadii looga soo horjeeday maamulkiisa.